स्वस्थ रहन केहि टिप्स - ज्ञानविज्ञान
# रोग पालेर जिउन कति मुस्किल पर्छ भन्ने त दीर्घरोगीलाई बढी अनुभव हुन्छ । त्यसैले, स्वस्थ जीवनबारे वेलैमा सोचेको राम्रो । दैनिक गरिने स–साना गल्तीले रोगी भइन्छ । त्यसैले, नियमित एउटै तालिकामा जिउनु राम्रो हुन्छ ?
# नियमित सूर्योदयअघि नै उठिसक्ने । उठेपछि ओछ्यानमै पल्टिएर चिया पिउने तथा टिभी हेर्ने काम नगर्ने । उठेलगत्तै बाथरुमको काम सकाउने । हल्का शरीर पखाल्ने, बिहानी सफाइको सबै काम सकेपछि भान्सामा जाने ।
# भान्सामा गएर आफैँ चिया या कफी बनाउने । दूध नहालेको खानु राम्रो हुन्छ । केही फलफूल पनि खाने ।
# मेडिटेसनतिर लाग्ने । नियमित मेडिटेसनले श्वासप्रश्वास सही राख्छ । १५ मिनेटजति मेडिटेसन गरे पर्याप्त हुन्छ ।
# मर्निङवाकमा निस्कने । दैनिक आधा घन्टाजति मर्निङवाक गरेको राम्रो ।
# बिहानको खाना हल्का लिनु नै राम्रो हुन्छ । ‘रिभर्स डाइटिङ’ गर्ने, अर्थात् खानामा भात सकेसम्म कम खाने, तरकारीमा जोड दिने । कम भातले पेट अघाउँदैन भने तरकारी बढी खाने । सलादमा बल गर्दा अझै उत्तम हुन्छ । सलाद आफैँले काटेर खाने । आफूले काटेको अलि धेरै खाइन्छ ।
# दिउँसो डाइटयुक्त हल्का–हल्का खाजा खाने । दिनमा दुई–तीनपटकसम्म खाँदा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । दिनमा दुईचोटि मात्रै खाने नेपाली चलन छ । दुई–तीन घन्टाको अन्तरमा थोरै–थोरै खाइराख्नुपर्छ ।
# बेलुकाको खाना साढे सात बजेभित्र खाइसक्दा राम्रो हुन्छ । जीवन भनेको ब्रेन मात्रै होइन, शरीर पनि हो । शरीरलाई रेस्ट चाहिन्छ । दैनिक कम्तीमा ६ घन्टा निदाउनुपर्छ । तर, खानेबित्तिकै सुत्नु राम्रो होइन, पेट लाग्छ । माछा, मासु, अन्डाजस्ता धेरै क्यालोरी भएको खाना बेलुकाको खानामा नखाने । यस्ता खाना बिहान र दिउँसो खाने ।
# बेलुकाको खानापछि लगत्तै ओछ्यानमा गएर पल्टिने बानी राम्रो होइन । खानापछि १५ मिनेटजति छत या घरबाहिर निस्केर टहलिनु राम्रो हुन्छ । सकेसम्म ९ देखि १० बजेभित्र सुतेको राम्रो हुन्छ । बिहान–बेलुका गरेर कम्तीमा एक घन्टा व्यायाम गर्नुपर्छ ।
# दैनिक कम्तीमा दुई–तीन लिटर पानी पिउने । अल्कोहल कम गर्ने, सकभर नपिउने । बाथरुममा तौल जाँच गर्ने मेसिन राख्ने । बाथरुम जाँदा हरेक दिन तौल जाँच्ने । तौल अस्वाभाविक घटबढ भएको छ भने विभिन्न कारणले हुन सक्छ । चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
# दैनिक स्वास्थ्य डायरी मेन्टेन गर्ने । खाने तरिकाको तालिका बनाउने । कतिवेला खाने ? के खाने ? तालिकामै चल्ने । बिएमआई (बडी मास इन्डेक्स) क्याल्कुलेट गर्ने । इन्टरनेटबाट गर्न सकिन्छ । हाम्रो हाइट र वेट राखेपछि बिएमआई देखाउँछ । पुरुषको २४ भन्दा कम र महिलाको २१ भन्दा कम हुनुपर्छ । पुरुषको कम्मर ४० इन्च र महिलाको ३५ इन्चभन्दा बढी हुनु राम्रो होइन । पेट बढेपछि रोगहरू जन्मिन थाल्छन् ।
# मेडिकल जाँच वर्षमा एकपटक गर्ने भनिन्थ्यो । तर, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनले १८ देखि ४० वर्ष उमेरका व्यक्तिले तीनदेखि पाँच वर्षमा जाँच गराउँदा हुन्छ भनेको छ । यो उमेरका व्यक्तिलाई खासै धेरै रोग लाग्दैन भन्ने हुन्छ । ४० वर्ष उमेर नाघेपछि भने हरेक वर्ष मेडिकल चेक गराउनुपर्छ । मेडिकल जाँच गराउँदा आफूलाई रोग लाग्दै गरेको या निरोगी रहेको भन्ने वेलैमा थाहा हुन्छ ।
Don't Miss it सफल जीवनका लागि प्लेटोका केही वाणी
Up Next सिमी जातको गेडागुडी राजमा र यसका फाइदाहरु
फुड पोइजनिङ कसरि हुन्छ |
कसरी छुटाउने च्याटिङको कुलत ? जान्नुहोस
नियमित रूपमा साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने गर्नुस् । फेस टु फेस कुराकानी गर्दा तपाईं आफ्नो मनको कुरा अरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ ।…